Samsung Galaxy S7 na S7 Edge Waterproof Smartphones - News Ọchịchị
Samsung Galaxy S7 na S7 Edge Waterproof Smartphones
South Korean mobile ibu kpughe ọgbụgba ọhụrụ top-ọgwụgwụ gam akporo igwe na fan ọkacha mmasị microSD kaadị oghere, ibu-ngwa-ngwa ese foto na ibu batrị
Isiokwu a na-akpọ “Samsung Galaxy S7 na S7 Edge waterproof flagship smartphones ulo oru na MWC” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Sunday 21 February 2016 18.00 UTC
Samsung ka unveiled ya kacha ọhụrụ Galaxy S7 flagship smartphones, -eweghachi ọkacha mmasị atụmatụ dị ka ọ Aims imechi si n'elu-njedebe nke Android ahịa.
The ọhụrụ Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge Android smartphones, unveiled ke Barcelona na Mobile World Congress, ewu na imewe nke ikpeazụ afọ na-ewu ewu S6 nsụgharị ma tinye IP68 waterproofing na a microSD kaadị oghere – abụọ atụmatụ na Korean ụlọ ọrụ amatawo ihe maka ruo mgbe 2015.
The Galaxy S7 nwere a ewepụghị 5.1in ihuenyo ma a curved iko azụ, na-agbakwụnye na ergonomics. The ibu Galaxy S7 Edge nwere a 5.5in ihuenyo na-curved na-ekpe na nri-aka n'ọnụ na nwere ntakiri bezels ma n'akụkụ nke ihuenyo eme ka ọ onye nke kasị dị warara phablets dị.
The ọhụrụ smartphones nwere a microSD kaadị oghere maka expandable nchekwa, ihe Samsung igwe nwere ruo mgbe afọ gara aga. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ha abụọ na-agba ọsọ ọhụrụ version nke Android 6.0 Marshmallow, nwere 4GB Ram n'ihi mma multitasking na 30% ọzọ dị ike processors na "thermal spreader" mmiri-obi jụrụ technology izere igwe ekpo oke ọkụ.
Ma smartphones na-enwe budata ibu batrị, nke na-ekwe nkwa iji zere mkpa mgbe niile-na search nke a ike mgbe. The ụlọ ọrụ na-etinye na ngwaọrụ-enyere ịzọpụta batrị mgbe Ịgba Cha Cha, na-ekwe ka ndị ọrụ na weghara footage nke ha Ịgba Cha Cha sessions yiri ụzọ console gamers nwere ike.
Samsung Galaxy S7 nwere ike mgbe niile-na ngosi feature, na-egosiputa oge, ụbọchị ma ọ bụ ndị ọzọ na mmachi ozi na ihuenyo mgbe niile. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Samsung na-pushing ihe mgbe niile-na ngosi ọnọdụ nke na-eji na ihuenyo si AMOLED ngosi iji na-amụnye a di ntakiri graphic egosi oge, ụbọchị ma ọ bụ ndị ọzọ ọrụ na onye-configurable ọmụma. The ụlọ ọrụ na-azọrọ na atụmatụ ga-ewe obere karịa 1% batrị kwa hour.
The igwe na-enwe na a ọhụrụ, slimmer 12-megapixel igwefoto e na ala-ìhè foto n'uche. Ọ na-eji ibu 1.4um pikselụ na a oghere na ihe f na-akwụsị nke 1.7 ka 25% ọzọ ìhè n'ime ihe mmetụta, nakwa dị ka a nnọọ ngwa ngwa autofocus usoro, nyere aka gbochie grainy ma ọ bịara ikiri photos.
The igwefoto ugbu a na ruo si 0.46mm si azụ nke ekwentị. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Samsung, ndị kasị ibu n'ụwa ama emeputa, na-akpọchi na a agha n'elu na-ese n'elu mmiri votes nke smartphone na-azụ ahịa na Apple na kasị mepụtara ahịa.
The ụlọ ọrụ na-ịkụ nzọ on batrị, waterproofing na igwefoto nkwalite ịrata buyers, mgbe agbali mụbaa ibu ilekota gburugburu smartphone.
Samsung Galaxy S7 Edge ya curved ihuenyo. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Rory O'Neill, isi nke ika na ngwaahịa ahịa maka Samsung si: "The UK smartphone ahịa matured. ndị nọ n'okpuru 25 now họrọ a ama na mesiri ike na ya na mmekọrịta ya na ndị ọzọ ọrụ ndị na ngwaọrụ. Anyị nwere ime ihe karịrị nanị na-emepụta a smartphone, anyị nwere redefine ihe a ekwentị nwere ike ime. "
Part nke na push ga-Samsung si Internet Ihe usoro a na-akpọ SmartThings, gbakwunyere na ndị ụlọ ọrụ telivishọn, home audio usoro, ese foto na mebere eziokwu ekweisi mere na mmekorita ya na Facebook si Oculus Rift.
Samsung kwukwara na ọ bu n'obi ime ka ya na ekwentị mkpanaaka contactless ịkwụ ụgwọ usoro ugbu a na US na South Korea, Samsung Ṅaa, isii ọzọ ahịa na 2016, gụnyere UK, Spain, Australia, Brazil, China na Singapore.
The Gear 360 bụ Samsung si ọhụrụ 360 ogo igwefoto, ike nke na-agbapụ video na foto na iji azụ abụọ-anya anya m na abụọ 15-megapixel sensọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Samsung na-ulo oru a 360 ogo igwefoto, na Gear 360, nke yiri obere bọl ubé ibu karịa a golf bọl. Ya nwere ihe abụọ 180 ogo azụ-anya anya m, nwere ike remotely achịkwa a Samsung ekwentị na ike enuba video ma ọ bụ 30-megapixel photos na ozugbo.
Samsung Galaxy S6 Edge nyochaa: akụkụ ihe ụtọ, adịghị arụ ọrụ
Samsung Galaxy S6 Edge + review: na curvy 'iPhone 6 More egbu egbu '
36717	5 Android, Nkeji edemede, mobile igwe, Mobile World Congress, News, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphones, Technology
← The zuru okè Time of Year Mee 10 Big ịzụrụ [MENTALFLOSS] Genetic Ozi pụrụ inyere anyị aka ịghọta Lifestyle ize ndụ for Disease →